जिब्रो चिप्लिदा गालीको बर्षा खेपेका नेपाली कलकारहरु (भिडियो सहित) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/जिब्रो चिप्लिदा गालीको बर्षा खेपेका नेपाली कलकारहरु (भिडियो सहित)
जिब्रो चिप्लिदा गालीको बर्षा खेपेका नेपाली कलकारहरु (भिडियो सहित)
पछिल्लो केही समय यता नेपाली फिल्म उधोगमा कलकारकोजिब्रोकाकारण निक्कै चर्चा र झमेलामा जेलिएको छ । लकडाउनमा बर्षा राउत देखि पुजा शर्मा, सुष्मा कार्की, दिपक राज गिरि, साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह, दिपाश्री निरौला सम्म विवादको भुमरिमा फसे । अन्तत दिपाश्री निरौला डिप्रेशनमा समेत पुगेकी छन् । यो कुराको जानकारी निर्माता अशोक शर्माले गराएका छन् ।अशोकले उक्त स्टाटस भने प्राईभेट पनि गरिसकेका छन् ।
उनले फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै यो बताएका हुन । उनले सुशान्तको उदाहरण दिदै त्यस्तो कुनै क*दम न*चाल, हामी सबै तिम्रो साथमा छौ भनि डि*प्रेस*नमा पुगेका निरौलाको घर जाँदै गरेको पनि लेखेका छन् । यस्तै उनले यसको जिम्मेवारी त्यो अन्तरबार्ता लिने,अ*श्लि*ल कमेन्ट गर्ने, अ*श्लि*ल ट्रो*ल र टिकटक बनाउनेहरुले लिनुपर्ने लेखेका छन् । दिपालाई केही हु*नबाट ब*चाउन सबै कलाकर्मीहरु सं*बेदनसिल हुन समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो समय दिपा रजतपट अन्कल नामक एक कार्यक्रममा लिएको अन्तरबार्ताका कारण विवाद बनेकि थिइन् । प्रकाश सुवेदीले लिएको त्यस अन्तरबार्तामा उनले राजेश हमाल महानायक हैनन भन्ने कि*सिमको अभिव्यक्ति दिएपछी उनको च*र्को बि*रोध भएको थियो ।अन्ततः उनले माफी पनि मागिन । सेलाउने क्रममा रहेको बिषय दिपक राज गिरिले ‘चटपटे अन्तरबार्ता बहिस्कार गरौ’ र ‘ महानायक बनाउनेहरुलाई धन्यवाद’ भन्दै लेखेको स्ट्याटसका कारण वि*वाद झनै उ*त्क*र्समा पुग्यो ।
तोकेका बाहेक पसल मनलाग्दी खुले :नियम नमाने फेरि लकडाउन, सचेत हुन आग्रह !
तपाईको बच्चा जि*द्धी भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यी ५ तरीकाले सम्झाउँनुहोस् हुनेछैन समस्या
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन-२८ गते बुधबारको रा’शिफल !